कस्तो साथीको संगत गरियो भने सफलता पाइन्छ ? - कस्तो साथीको संगत गरियो भने सफलता पाइन्छ ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ असार, 06:09:55 AM
काठमाडौं । नेपाली समाजमा भनाई नै छ, ‘संगत गुनाको फल ।’ जस्तो संगत गरिन्छ, त्यस्तै भइन्छ । अर्को घतलाग्दो पंक्ति छ, ‘असल मान्छेको संगतले फाइदा गर्छ । हावा जब फूलबाट गुज्रन्छ, सुविासित हुन्छ ।’
जसको वा जस्ताको संगत गरियो आफू पनि त्यस्तै भइन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले असल संगतमा रहन सिक्नुपर्छ, अर्को कुरा आफ्ना लागि के शत्रु र को मित्र भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । असल साथीको कदर गर्न जान्नुपर्छ । तेस्रो कुरा सदैव सत्यको साथ रहनुपर्छ । भीष्म पितामहजस्ता ज्ञानी पनि दुर्योधनको संगतमा लागेर विराट राजाको गाई चोर्न हिँडेका थिए ।
खराबको संगतमा परेपछि
तपाईं हरेक हिसाबले असल हुनुहुन्छ तर संगत खराब छ भने तपाईं बर्बाद हुन सक्नुहुन्छ । तपाई सार्‍है खराब हुनुहुन्छ तर संगत भने असल छ र तपाई उनीहरूको कुरा सुन्नु पनि हुन्छ भने तपाईको जीवन सुखमय एवं आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ ।
महाभारतकै कुरा गर्दा दुर्योधन त्यति खराब थिएनन्, पहिले त उनको नाम नै सुयोधन थियो तर पछि मामा शकुनीको संगत एवं प्रभावका कारण उनी खलनायक साबित भए ।
को सत्रु, को मित्र रु
संगत गर्दा शत्रु र मित्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ । महाभारतको थुप्रै प्रसंगमा को कसको मित्र र को कसको शत्रु भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न गार्‍हो छ । कतिपय मित्र त्यस्ता पनि थिए जसले ऐनमौकामा आफ्नै सेनामाथि समेत विश्वासघात गरे । शल्य एवं युयुत्सु यसका उदाहरण हुन् ।
भनाइ पनि छ, हितैषी सदैव तीतो बोल्छ तर चाप्लुस सदैव मीठो बोलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनतर्फ लाग्छ ।
कस्ता साथीलाई विश्वास गर्ने रु
कतिपय अवस्थामा हाम्रा अगाडि मित्रको भेषमा शत्रु आउँछन् र हाम्रो रहस्य थाहा पाएर जान्छन् । कतिपय साथी यस्ता पनि हुन्छन् जो दुवैतर्फ लाग्छन् ।
यस्ता साथीमाथि पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिँदैन । कौरवका तर्फबाट लडेका भीष्म, द्रोण, शल्य आदिले अन्ततः पाण्डवहरूको पक्ष लिएका थिए । यिनीहरू कौरवका तर्फबाट लडे पनि पाण्डव पक्षकै प्रशंसा गर्थे अनि युद्ध जित्ने उपाय वा अनुभव पाण्डवहरूलाई नै सुनाउँथे ।
कौरवी सेना पाण्डवहरू सेनाका तुलनामा निकै शक्तिशाली थिए । संख्या पनि चार अक्षौहिणी बढी थियो । एक से एक योद्धा एवं ज्ञानीजन कौरवका तर्फबाट लडेका थिए ।
पाण्डवहरूतर्फ त्यस्ता योद्धा थिएनन् । दुर्योधनले पनि कृष्णसँग सहायता माग्ने क्रममा एक्ला कृष्णको साटो एक अक्षौहिणी नारायणी सेनालाई चुनेका थिए । अन्ततः यही कुरो कौरवका लागि घातक सिद्ध भयो । एक्ला कृष्णले आफूले हतियार नउडाईकनै पाण्डवहरूलाई जिताए ।
भनिन्छ, धेरै मानिस, धनी वा ठूला पदाधिकारी आफ्ना पक्षमा हुँदैमा युद्ध जित्न सकिँदैन । जीत उसको हुन्छ जसको पक्षमा ईश्वर, धर्म र सत्य हुन्छ । यसकारण कहिल्यै पनि सत्यको साथ छाड्नु हुँदैन ।
सत्यको मार्गमा कठिनाइ त हुन्छ तर त्यो सुखद नतिजा दिने खालको हुन्छ । गलत काम गरेर सम्पन्न भएका आफन्त एवं इष्टमित्र छन् भने तिनका प्रभावमा परेर आफू पनि त्यस्तै बन्छु भन्नेतर्फ लाग्नुहुँदैन । हाम्रो आँखाले वर्तमान मात्र देख्न सक्छ भविष्यमा हाम्रो दृष्टि पुग्दैन ।
इमान्दार र निस्वार्थीको साथ
इमानदार तथा विनास्वार्थ साथ दिने साथीले जीवनलाई सम्पूर्णतामा बदल्न सक्छ । पाण्डवहरूका पक्षमा श्रीकृष्ण थिए भने कौरवका पक्षमा महान् योद्धा कर्ण थिए । यी दुईले आफ्ना पक्षलाई निःशर्त एवं विनास्वार्थ साथ एवं पूरापूर सहयोग दिएका थिए ।
कर्णलाई छलपूर्वक नमारिएको भए कौरवहरूको जीत हुनसक्थ्यो । यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा के छ भने दुर्योभन आफ्ना मित्र कर्णको कुरा सुन्नुको सट्टा मामा शकुनीको कुरा सुन्दथे । कर्ण त दुर्योधनलाई राम्रो बाटोमा लैजान चाहन्थे । उनले हरहमेशा दुर्योधनको हित हुने असल सल्लाह दिएका थिए तर उनको रायसल्लाहको कुनै महत्व हुँदैनथ्यो । जब कि पाण्डवहरू कृष्णको सल्लाहलाई आँखा चिम्लेर पालना गर्थे ।
मित्रता गरिन्छ भने त्यसलाई निर्वाह पनि गर्नुपर्छ तर यसको अर्थ मित्रको गलत काममा साथ दिनुपर्छ भन्ने होइन । आफ्ना कुनै मित्रले नैतिक, कानुनी वा अन्य कुनै पनि हिसाबले गलत ठहरिने काम गरिरहेको थाहा भए उसलाई त्यसो नगर्न, गलत बाटोमा नहिँड्न सल्लाह दिनुपर्छ ।
त्यसो गर्न नमानेको खण्डमा साथीलाई नै छाड्न समेत हिच्किचाउनु हुँदैन । जसलाई हितैषी, सत्यवादी, आपतविपतमा साथ दिने, गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने मित्रको साथ मिल्छ त्यस्ताको जीवन अवश्यमेव सुखी हुन्छ । अनि उसैको जीवन सफल पनि हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने महाभारत भन्छ( इमान्दार मानिस ईश्वरको सर्वोत्कृष्ट कृति हो । एजेन्सी
२०७५, १७ असार, 06:09:55 AM